ကွန်ပျူတာအတွက် အလွန်အသုံးဝင်သော Tool လေးတစ်ခု ~ (IT) ကိုထိုက်
4:41 AM နည်းလမ်းများ No comments
သူငယ်ချင်းများအားလုံးအတွက် အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ စွယ်စုံသုံးဆော့ဝဲလ်လေးတစ်ခု မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်လေးလန်းချက်ကတော့9လောက်ရှိတယ်။ ကွန်ပျူတာရဲ့ System information ကိုပြသပေးခြင်း၊ Window activate ဖြစ်၊ မဖြစ်စစ်ဆေးပေးခြင်း၊ ကွန်ပျူတာမှာ မလိုအပ်တဲ့ log files, recent, duplicate file များကိုရှင်းလင်းပေးပြီး၊ ကွန်ပျူတာကို မြန်ဆန်သွက်လက် အောင်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ data တွေကို backup/restore လုပ်ခြင်း၊ Internet browsers တွေရဲ့ history, cookies, cache များကိုရှင်းလင်းခြင်း၊ ကွန်ပျူတာရဲ့ system ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို ဒီ tool မှတစ်ဆင့် ၀င်ရောက်ပြုပြင်နိုင်ခြင်း အစရှိတာတွေကို လုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ Tool လေးတစ်ခုမို့ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
D7 isaPC technician’s multi-tool designed for one click automation in all repair scenarios.It has many capabilities and many uses including offline and live malware removal assistance, offline registry editing, data backup and restore, CPU/RAM stress testing, information gathering and quality assurance uses, etc. etc.
Increase your productivity and efficiency, save time and dramatically increase revenue
Provide your technicians withauniform procedure to follow, ensuring optimal quality and work performance consistency
Providing one-click automation for:
Windows Repair and Maintenance
System Info / Reporting
Keeping all of your tools updated!
https://www.facebook.com/pages/%E1%80%A1%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%90%E1%80%AE-%E1%80%80%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%91%E1%80%AD%E1%80%AF%E1%80%80%E1%80%B9/609899229020384 Like ပေးခဲ့ပါခင်ဗျာ